Location: Mbido » Ịdee » WTN » Onye isi oche Dr. Walter Mzembi bụ Olileanya Ọhụrụ maka njem nlegharị anya Africa
Dr. Walter Mzembi, onye isi oche WTN Africa
World Tourism Network bụ nzukọ n'azụ mkparita uka na-aga n'ihu na rebuilding.travel na ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na mba 128.
Afrịka na-ekerekarị òkè dị mkpa na mkparịta ụka ndị a.
Taa, World Tourism Network kwupụtara WTN Africa, isi ọhụrụ pụrụ iche nwere otu ihe mgbaru ọsọ na-ebuli ihe mgbochi maka njem nlegharị anya Africa n'ụwa.
Anọ n'ime ndị hibere ụlọ ọrụ njem nlegharị anya Afrịka bụkwa ndị tọrọ ntọala World Tourism Network. Ọ na-akọwa njikọ pụrụ iche dị n'etiti Board Tourism Board na World Tourism Network.
Emebere netwọkụ njem nlegharị anya ụwa maka azụmaahịa
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya Africa bidoro Project Hope iji nyere ụwa aka n'ịchịkwa nsogbu COVID-19. Oge nrọ Mzembi gụnyere ọtụtụ ndị isi na-etinye aka na Project Hope.
Ndị guzobere anọ a gụnyere Juergen Steinmetz, Dr. Peter Tarlow, Alain St.Ange, na Dr.Taleb Rifai.
Network Njem Nleta Ụwa Africa, na Ndị njem nlegharị anya nke Africa, Na Ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Africa bụ mmekorita ọhụrụ na-emeri emeri ma nwee ike iweta mkparịta ụka nrụgharị ahụ n'ọrụ maka ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya Africa.
Ya mere nkwupụta nke WTN President Dr. Peter Tarlow kwupụtara taa dị ịrịba ama.
Ndị isi na ndị otu WTN nwere obi ụtọ ịkpọsa mmalite nke WTN Africa, nke ga-akwado Brand Africa, Africa Diaspora, na mmasị ndị Africa ndị ọzọ n'ime nzukọ na gburugburu ụwa.
Onye bụbu minista na-ahụ maka njem nlegharị anya maka mba Zimbabwe na onye na-ahụ maka ihe gbasara mba ofesi ruo na Nọvemba afọ 2017 ejirila obi ụtọ nabata idu ngalaba a dịka onye isi ala mpaghara mmalite ya.
WTN ga-akpọsa n'oge oge ndị isi mpaghara mpaghara ndị ọzọ ga-akwado ọdịmma nke Europe, America, Asia na Oceania. Obi abụọ adịghị ya n'okpuru nduzi nke Dr. Mzembi, onye ndoro-ndoro ochichi nke Africa Union maka ahọpụtara onye odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO na 2017, Africa ga-edobe maka mgbake njem nlegharị anya na-eche ihe ịma aka dị adị nke COVID 19 ihu.
Ihe ịma aka a nke weghaghachi uru nke ngalaba a na nnukwu uto ya bụ ihe nketa nke afọ iri mgbe ọ bụ Minista njem nlegharị anya wee rụọ ọrụ nke ọma na ndị dị ka onye bụbu Minista Seychelles Alain St Ange, Minista Kenya Najib Balala, Minista Bartlet nke Jamaica. na n'ezie onye bụbu odeakwụkwọ ukwu Taleb Rifai n'etiti ndị nkwado ndị ọzọ ama ama.
Ekele diri ndị Africa na Dr. Walter Mzembi onye a ga-achọ nkà diplomatic mara mma dịka ụwa mechiri emechi meghere njem na njem nlegharị anya.
Maka ozi ọzọ na WTN Africa pịa ebe a
Africa Brand Corporation Covid Covid-19 Jamaica Marketing Peter Tarlow Seychelles Taleb Rifai Tourism WTN Zimbabwe
Mgbasa ozi maka $ 35 ọnụ ahịa ọnụ ahịa insulin
Usoro pọdkastị nyocha ọhụrụ gbasara mmalite nke...
Ritz-Carlton Reserve na-abịa Saudi Arabia
Montserrat mepegharịrị: mmachi COVID-19 kwụsịrị
Ndebanye aha nke mbụ maka obere-na-arụsi ọrụ ike...
Hassan Shuaibu Chiroma ekwu, sị:
Jenụwarị 24, 2022 na 08:36
Nke ahụ bụ nnukwu mmepe maka njem nlegharị anya Africa. Daalụ maka mbọ gị na nnukwu mmezu a. Daalụ niile.
Enwere nhọrọ ịbụ onye otu maka agụmakwụkwọ na nzukọ ọhụrụ a, biko?